Mahad Salaad: “Farmaajo wuxuu ka shaqeynayaa qabyaalad” | KEYDMEDIA ONLINE
Mahad Salaad: “Farmaajo wuxuu ka shaqeynayaa qabyaalad”
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, oo ka md ah Golaha Shacabka ee mudadiisii dhamaatay ayaa Maxamed Cabdullahi Farmaajo ku eedeeay in ku dhaqmayo qabyaalad.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Salaad ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu ka dhaqmayo qabyaalad iyo qaraabo-kiil, isla markaana Siyaasiyinta ay is hayaan uu kala heshiiyay kaliya Cabdirashiid Janan oo ay isku beel yihiin.
Waxaa dhawaan soo baxay war sheegaya in Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Janan,uu u soo wareegayo dhanka Dowladda, kadib wada-hadallo dhex maray isaga iyo DF.
Xildhibaan Mahad oo u muuqday inuu ka falclinayo heshiiskaas ayaa Madaxweynayasha Maamuulada Galmudug, iyo HirShabeelle iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir kula taliyay in ay indhaha kala qaadan.
“Siyaasiinta faraha badan ee Farmaajo ay is hayeen hadii uu ka doortay in uu la heshiiyo ina adeerkiis Cabdirashiid Janan. Aniguna waxaan kula talin lahaa MW Qoorqoor, MW Guudlaawe iyo Gud. Filish iyaguna in ay la heshiiyaan Hawiyahooda. Inlee Farmaajo waxa uu ka shaqeynayo dowladnimo ma’ahane waa qaraabakiil iyo qabyaalad soo mutuxane”. ayuu yiri, Xildhibaan Mahad Salad.
Hadalka Xildhibaan Mahad Salaad, ayaa ku soo aadaya iyadoo Qoor-qoor, Guud-laawe iyo Finish ay hoosta kaga jiraan Farmaajo, isla markaana howlihii loo igmaday oo dhan ay faraha ka soo laabteen, si ay markale kursiga ugu soo celiyaan Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday.
The minister’s statement came after the former Banadir Police Commissioner retreated to Shirkole Village in Hodon district after managing to escape from a government raid aimed to arrest him.